Baolina kitra – Fanazarantena :: Hiverina an-kianja ny klioban’ny Fosa Juniors - ewa.mg
Baolina kitra – Fanazarantena :: Hiverina an-kianja ny klioban’ny Fosa Juniors
News - Baolina kitra – Fanazarantena :: Hiverina an-kianja ny klioban’ny Fosa Juniors
L’article Baolina kitra – Fanazarantena :: Hiverina an-kianja ny klioban’ny Fosa Juniors est apparu en premier sur AoRaha.
Herisetra :: Tovolahy, 19 taona, noterena nisotro asidra
Tsy maintsy notsaboina tany amin’ny hopitaly ny tovolahy iray, 19 taona, noho ny ratra nahazo azy, tany Mangarivotra Atsimo Toamasina, tamin’ny sabotsy lasa teo. Voalaza fa may ny vavany rehefa noterena nisotro asidra. Lehilahy iray no voatondro ho nanao ny herisetra. Milaza ny hametraka fitarainana eny amin’ny mpitandro filaminana ny fianakavian’ilay tovolahy. Andrasana ny fahatongavan’ ny fitoriana amin’io raharaha io, hoy ny polisy, hirosoana amin’ ny fanadihadiana sy ny fisam­borana an’izay voarohirohy. «Voairaka hividy zavatra ilay tovolahy, tamin’io hariva io, no nosamborin’ny lehilahy iray ary nambarany fa mpangalatra. Nentiny tao an-trano ilay tovolahy. Noterena nisotro asidra izy, saingy tsy nahatelina izany. May ny vavany. Vory maro teo ny fokonolona. Nentina tany amin’ny hopitaly haingana itsy tovolahy. Avotra ny ainy », araka ny fitantaran’ny olona any an-toerana. Voalaza fa efa nisy loni­lony sy disadisa teo amin’ity tovolahy ity sy io lehilahy voatondro ho nampitelina asidra azy io. L’article Herisetra :: Tovolahy, 19 taona, noterena nisotro asidra est apparu en premier sur AoRaha.
Voasambotra teny amin’ny tsenan’Andravoahangy, ny zoma lasa teo, ny tovolahy roa, 19 taona sy 20 taona. Tratra nanendaka vehivavy iray izy roa lahy ireo. Mpiambina teo amin’ny manodidina no nahasambotra sy nanolotra azy ireo tamin’ny polisy nanao fisafoana tsy lavitra teo. L’article Tovolahy mpanendaka est apparu en premier sur AoRaha.
Vono olona :: Vehivavy iray ahiana nanapitra ny ain’ny namany
Voarohirohy tamin’ ny raharaha vono olona ny vehivavy iray, sivy amby roapolo taona, voasambotry ny polisy tany Tsarahasina Port-Bergé, tamin’ ny alahady lasa teo. Vehivavy namany ihany iry nindaosin’ ny fahafatesana vokatry ny herisetra nihatra taminy. Voa- tazona am-ponja vonjimaika ity ramatoa ahiana ho namono olona ity, eo am-piandrasana ny fotoam-pitsarana. Hita faty tamin’ny kianja fanaovana fanatanjahantena tao amin’ny lisea teknika Port- Bergé , tamin’ny alatsinain’ ny Pantekoty lasa teo, ny vehivavy iray. Tsikaritra avy hatrany fa nisy namono io vehivavy io tamin’ny fahitana ratra teo amin’ny lohany sy ny tarehiny. Voafatotra tao an-damosiny ny tanany roa. Nanomboka teo ny fanadihadiana rehetra, izay niainga tamin’ny famantarana ny mombamomba an’ilay namoy ny ainy. Mpampiantrano Voalaza fa mpanangom-bokatra ny vehivavy iray avy any Ambanja, izay nikasa hividy vary tao Port-Bergé. Nitondra volabe manodidina ny folo tapitrisa ariary izy tamin’ izany. «Vehivavy tompon-tanana sady miara-miasa ara- barotra aminy no nampi- antrano azy, nanomboka ny sabotsy nahatongavany tao Port- Bergé hatramin’ny alatsinainy nahitana ny razana. Nandeha niafina tany ambanivohitra ilay nampiantrano ka tany no nisamborana azy. Mbola tavela tao an-tranony ny entan’ ilay vehivavy maty», araka ny fitantaran’ny polisy nanao ny fanadihadiana. Ny resaka vono olona no nitondrana ny famotorana an’ity vehivavy voasambotra ity. Fantatra, nandritra izany, anefa fa efa nahazo vola 55 600 000 ariary noho ny fisolokiana ihany koa izy, araka ny nambaran’ny mpanao famotorana hatrany. L’article Vono olona :: Vehivavy iray ahiana nanapitra ny ain’ny namany est apparu en premier sur AoRaha.
Atletan’ny JIOI nahazo medaly: horaisin’ny filoham-pirenena eny Iavoloha
Araka ny loharanom-baovao, horaisin’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina eny amin’ny lapan’Iavoloha, ny alatsinainy ho avy izao, ireo atleta avy niatrika ny lalaon’ny Nosy natao tany Maorisy. Mandritra izany no hanolorana ny mari-pankasitrahana sy ny valin-kasasarana ho an’ireo nitondra medaly niverina teto an-tanindrazana. Samy hafa avokoa ny tambiny omena azy ireo, ho an’ny nisalotra medaly volamena, volafotsy ary ny alimo. Tsiahivina, niisa 49 ny medaly volamena azon’ny Malagasy nandritra ny lalaon’ny Nosy farany teo, 47 ny volafotsy ary 30 ny alimo, izany hoe medaly 126 izany no nentin’ireo atleta nody. Mendrika fankasitrahana izany, araka ny nambaran’Andriamatoa Minisitra, ny talata lasa teo, nandritra ny fihaonany tamin’ny federasiona rehetra nandray anjara, teny amin’ny lapan’ny fantanhajantena Mahamasina.Lalao AfrikanaHifantoka amin’ny lalao afrikana hotanterahina any Maraoka indray izao ny sain’ireo atleta malagasy, fifaninana goavana hanomboka ny faha-19 jolay izao. Taranja 11 no handraisan’ny Malagasy anjara amin’izany, ny atletisma, ny fibatana fonjamby, ny basikety, ny escrime, ny Tolona, ny Judo, ny ady totohondry, ny tekwondo, ny tenisy ambony latabatra, ny tenisy ary ny karate. Hanomboka tsy ho ela ny fampivondronana hanomanana ity lalao afrikana ity. Mi.RazL’article Atletan’ny JIOI nahazo medaly: horaisin’ny filoham-pirenena eny Iavoloha a été récupéré chez Newsmada.
Sekoly katolika: misokatra ny fisoratana anarana
Manomboka amin’ity herinandro ity ny fandraisana ny fisoratana anarana amin’ny sekoly katolika ho an’ny taom-pianarana vaovao 2020-2021. « Tsy nisondrotra ny saran’ny fisoratana sy ny saram-pianarana ho fitsinjovana ny ray aman-dreny », hoy ny mpitantana ny sekoly sasany. Manodidina ny 60 000 Ar ka hatramin’ny 80 000 Ar ny saram-pisoratana anarana sy ny adidy maro miaraka aminy aloa isan-taona. 27 000 Ar – 30 000 Ar kosa ny saram-pianarana isam-bolana. Na mbola manomana ny fanadinana BEPC sy bakalorea aza ny kilasy 3ème sy ny famaranana, tsy maintsy efa heverina sahady ny firosoana amin’ny taom-pianarana vaovao , hoy ny mpandrindra ny fampianarana katolika eto Madagasikara. Ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana kosa, miandry ny valim-panadinana hivoaka vao mandray fanapahan-kevitra amin’ny fisoratana anarana vaovao.Ho an’ny kilasy intermédiaire, ho an’ireo niakatra amin’ny kilasy ambony, mamita ny fandaharam-pianarana tsy vita nandritra ny taom-pianarana 2019-2020 ny mpampianatra isan-taranja mandritra ny iray na roa volana eo ho eo, araka ny fanazavana azo. Tsy miova fa ny kahie nampiasaina tamin’ny taon-dasa no entina satria mitohy ny lesona sy ny fampiharana.Vonjy A. L’article Sekoly katolika: misokatra ny fisoratana anarana a été récupéré chez Newsmada.
Sarona tamin’ny fotoana tsy nampoizina ! Nambaran’ny loharanom-baovao iray fa tsy migadra ao anatin’ny fonjaben’i Tsiafahy akory ilay mpandraharaha, Rajaonah Mbola sy ny teratany maorisianina roa hafa fa nomena vahana manokana. Noraisina avy hatrany ny fepetra momba izany.Efitrano manokana arifomba tanteraka. Fantatra fa nisy ny fisafoana tampoka nataon’ny tale jeneralin’ny Fandraharahana ny fonja teny Tsiafahy, ny 20 septambra lasa teo, tokony ho tamin’ny 4 ora maraina, araka ny voalazan’ny loharanom-baovao iray. Sarona tamin’izany fa tsy ao anatin’ny fonja itazonana azy vonjimaika Rajaonah Mbola sy ireo teratany maorisianina roa. Nafindra sy mipetraka soa aman-tsara any amin’ny “batiment administrative”, biraon’ny sefo iray lehiben’ny mpiandry fonja ilay mpandraharaha. Ahitana fitaovana samihafa, toy ny fahitalavitra “écran plat”, ordinatera, vata fampangatsiahana kely, fatana mandeha amin’ny “gaz” miaraka amin’ny kojakojan-dakozia ilay efitra. Tahaka izany koa ireo teratany maorisianina roalahy, nahazo efitrano mitokana, ahitana fitaovana samihafa, mitovy amin’ireo. Natory soaman-tsara avokoa izy ireo, araka ny nambaran’ny loharanom-baovao tamin’io fisafoana tampoka natao io.Resaka toe-pahasalamanaNilaza ny tompon’andraikitra voalohan’ny fonjan’i Tsiafahy, rehefa nanontaniana fa anton’izao namindrana toerana azy ireo amin’ny trano arifomba ivelan’ny fonja ny resaka toe-pahasalaman’izy telo lahy ireo.Manoloana izany, nafindra avy hatrany, naverina ao anatin’ny fonjaben’i Tsiafahy toa ireo voafonja rehetra izy ireo. Nohamarinin’ny tompon’andraikitra koa fa tsy mitombina ny filazana fa hoe tsy salama izy ireo. Nomena fampitandremana hentitra ny tsy hiverenan’ny tranga tahaka izao koa ny lehiben’ny fonja fa handraisana fepetra avy hatrany ny momba azy, araka ny loharanom-baovao hatrany. Voalaza rahateo fa mety hanohintohina ny filaminana eny Tsiafahy sy ny filaminam-panjakana izany.Tokony hitohy sy hiitatra amin’ny fonja hafaTsiahivina fa voatana am-ponja vonjimaika (MD) avokoa ary samy tsy mbola voatsara izy telo lahy ireo. Nanomboka ny 22 janoary 2020 ny nitanana an-dRajaonah Mbola raha samy tamin’ny 12 jona 2018 kosa ireo teratany vahiny roa hafa.Araka izany, tokony harahi-maso sy hanaovana fisafoana tampoka tahaka izao avokoa ireo fonja rehetra. Ahina hiteraka kolikoly sy firaisan-tendro ny tranga tahaka izao ka ilaina ny fanohizana ny hetsika tahaka izao.RandriaL’article Tratran’ny fisafoana tampoka : tsy migadra ao anatin’ny fonjan’i Tsiafahy Rajaonah Mbola a été récupéré chez Newsmada.
Fiaraha-mientan’ny mpanohitra: hidongy tsy handray anjara amin’ny fifidianana ny Tim
Handeha ila ny fifidianana ? « Tsy handray anjara izahay. Tsy ara-dalàna ny firosoana amin’io fifidianana io. Aleo hitsara ny vahoaka na ara-dalàna na tsia izany fifidianana izany. Tena amboletra ny hanaovana izany », hoy ny filoha nasionalin’ny Tim, Ravalomanana Marc. Namory sy nanome toromarika ireo olom-boafidy ahitana ben’ny Tanàna sy ny mpanolotsaina, ny depiote, ny loholona tetsy Bel Air ny tenany tamin’izany. Nanteriny fa miara-dalana amin’ny vondron’ny parlemantera sy ny mpanohira, nifamory teny Andrainarivo izy ireo. « Voafehy ary tsy hiatrika na handray anjara amin’izany fifidianana izany ireo olom-boafidinay ireo », hoy ihany izy.Momba ny fanakatonana ny AAA kosa, nambarany fa tsy tompon’andraikitra amin’io orinasa io ny tenany. « Mazava ny voalazan’ny sori-dalana raha momba ny hetran’ny Tiko fa anjaran’ny fanjakana ny manonitra ireo orinasa niharam-boina tamin’ny krizy teto amin’ny firenena », hoy ihany izy.Tsiahivina fa anisan’ireo nandray anjara tamin’ny fihaonamben’ireo antoko politika ivelan’ny fitondrana sy ireo parlemantera, ao anatin’ilay antsoina hoe “Groupe Panorama” ny avy amin’ny Tim. Mitovy ny tadin-dokanga ny amin’ny tsy fanekena ny hirosoana amin’ny fifidianana loholona.Synèse R.L’article Fiaraha-mientan’ny mpanohitra: hidongy tsy handray anjara amin’ny fifidianana ny Tim a été récupéré chez Newsmada.
Nieren-doza ilay fivarotan-tsolika: trano 15 levon’ny afo avy amin’ny… taim-bankona
Trano miisa 15 no indray kila hotohoton’ny afo, omaly tamin’ny 10 ora maraina tao Mangarano Toamasina, mifanila amin’ny tobin-tsolika iray. Taim-bankona niainga avy ao amin’ny toeram-piompiana akoho matavy no nitarika ny firehetana…Loza iray, loza roa…! Saika izany hatrany no hita tato ho ato izay, na lozam-pifamoivoizana io na haintrano goavana. Raha ity zava-nitranga tao Toamasina, omaly ity, niainga avy tamina afona taim-bankona ao amin’ny trano fiompiana akoho matavy no pitik’afo nampijoalajoala ny afo, araka ny fanazavan’ny lehiben’ny mpamponjy voina ao Toamasina, ny Kly Charles Desiré. Nisoko mangina tao anaty taimbankona ny afo ka nahazo ny fitaovana tao an-trano ka nampiitatra ny afo. Raikitra ny fifanjevoana teo amin’ireo niharam-boina satria nalaky ny fiitaran’ny afo. Saika zava-doza ny fisian’ny tobin-tsolika iray teo akaikin’ireto trano nirehitra ireto. Samy nanao izay ho afany ny teo amin’ny manodidina nifanome tanana tamin’ny mpamonjy voina mba tsy hiitaran’ny afo. Voafehy ihany anefa ny izany ka tsy tonga tany amin’ny faritra misy ny tobin-tsolika. Ankoatra, ny fanafihan-jiolahy mitam-pidiana mahery vaika, isan’ny mampalaza ny faritra Atsinanana ny fisian’ny haintrano matetika any an-toerana. Ho an’i Toamasina manokana, tato anatin’ny volana septambra ity, indroa nisehoana haintrano goavana tany an-toerana. Miisa 18 tafo ireo trano nirehitra tao anatin’izay 21 andro izay, nahitana traboina miisa 123 raha antapitrisany maro kosa ny entana lasa lavenona.Sajo sy J.CL’article Nieren-doza ilay fivarotan-tsolika: trano 15 levon’ny afo avy amin’ny… taim-bankona a été récupéré chez Newsmada.